Moe Kai: တွေးစရာ မြန်မာ မှုလေးတွေ
နောက် သေသေချာချာ လေးလေး နက်နက် ပြန်တွေးမိတော့ ကျမ မြန်မာပြည်နဲ. ဝေးနေတာလဲ ၆ နှစ် တော်တော် ကျော်လာပါပြီ။ အင်တာနက်မှာ မြန်မာ အမျိုးသမီးလေးတွေ အလွန် ပျက်စီးနေကြ ကြောင်းလဲ မကြာ ခဏ ဖတ်ရပါတယ်။ ခောတ်များ ပြောင်းပြီး အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှု ကို အတုခိုး ကျင့်သုံး နေကြပြီလားလဲ ကျမ မသိတော့ပါ။
ပြောရမှာ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ် လှန် ထောင်းသလိုပါပဲ(ဒီ မြန်မာ စကားပုံ ကော တကယ် ရှိရဲ. လားမသိ) တချို. မြန်မာ များကလဲ အလွန်. အလွန် မိုက်ရိုင်းပါတယ်။ ကျမ ဒီရောက်ခါစ မအူမလည် အင်တာနက် google chatting မှာ ကိုယ် မသိတဲ့ မြန်မာ အမျိုးသား တယောက်ကို “မြန်မာ ပဲလေ မြန်မာလို စကားပြော၊ မြန်မာ သတင်းလေးတွေ မေးရတာပေါ့” ဆိုပြီး လက်ခံ Chat မိလိုက်တာကနေ အဲဒီ အမျိုးသားက စ မိုက်ရိုင်းလာပြီး မဟုတ်က ဟုတ်က စကားတွေပြောလာပါတယ်။ ဒါနဲ. ဆက် chat မလုပ်တော့ဘဲ Online က ထွက်လိုက်တော့ ကျမနဲ. Chat လုပ်ထားတာတွေ ကို Edit လုပ်ပြီး ကျမကို လိုက် နာမည် ဖျက်ဖို. သူက ကျိုးစား ဖူးပါတယ်။ တော်ပါသေးတယ် နားလည်တတ်တဲ့ ယောက်ျား ကို ပိုင်ဆို်င်ထားလို.သာ။ အဲဒီ အချိန်က စလို. ကျမ Online Chatting ဆို ဝေးဝေးက ရှောင်ပါတယ်။ အားလဲ မအားသလို စကားပြောဖုို.လုိုလာရင်လဲ ဖုန်းပဲ သုံးပြီးခေါ်ပါတော့တယ်။
မြန်မာ မိန်းကလေးတွေ ဖက် ကရော ဘယ်လောက် ပျက်စီးနေလဲ၊ မြန်မာမှု မထိန်းကြတော့လဲ ဆိုတာလဲ ကျမ မသိပါ။ မြန်မာမလေးတွေရဲ. ယဉ်ကျေးမှုနဲ. မညီတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကိုတော့ အင်တာနက်မှာ မကြာခဏ မတွေ.ချင်မှ အဆုံးပါ။ ဟိုးတလောကတောင် မြန်မာ ဆရာဝန်မလေး တယောက် ဆိုပြီး မသင့်မတော် ဓါတ်ပုံတွေ တွေ.မိလိုက်ပါသေးတယ်။ တကယ့် အဖြစ်အပျက်လား ယုတ်မာတဲ့ မြန်မာ တချို.ကဘဲ သူမလေး ကို မကောင်းကြံထားတာလား ဆိုတာတော့ ကျမ မသိပါ။
ကိုယ်ကိုယ်ကို ကတော့ အသက်ကြီးတဲ့ အဒေါ်ကြီး တယောက်ပဲ ဖြစ်နေပြီလားလို. ခံစားမိပါတယ်။ အသက်ကြီးပြီး အချိန်စီးအောင်လဲ ကျိုးစားရပါ ဦးမယ်။ ကိုယ် ကလေးရတဲ့ အချိန်ကျရင်ကော မြန်မာ ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းမယ့် ကလေးတွေ ဖြစ်လာအောင် ဘယ်လို ပြုစု ပျိုးထောင်ရပါ့ ဆိုတာလဲ တွေးပြီး ရင်ပူမိတာ အမှန်ပါပဲ။
Facebook က ရလာတဲ့ ပုံလေးတချို. Share ပြီး ဒီစာကို အဆုံသတ်လိုက်ပါပြီ။
ဓါတ်ပုံ တွေရဲ. original link က ဒီမှာပါ။